Apple kutengesa muchina yechina 2018 | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch yakatora hafu yemusika we smartwatch mukota yekupedzisira ya2018
Mukombe weCupertino havasati vambozivisa zviri pamutemo nhamba yekutengesa yeApple Watch, iyo yakamanikidza vaongorori vazhinji kuyedza kuita raramo kuti vazive, angangoita, nhamba yeApple Watch iyo yaakaisa pamusika zvirinyore kubva payakatangwa.
Iwo matsva manhamba ane hukama neichi chishandiso, anotiratidza kuti mukati mekota yekupedzisira ya2018, mumwe muvanhu vaviri akatenga smartwatch, yakasarudza mhinduro yaApple. Sekureva kwe Strategy Strategy, Apple Watch kutengesa mukota yechina ya2018 yakasvika mamirioni e9.2 mamirioni.
Zvakanaka, kupfuura kutengesa, isu tiri kutaura pamusoro pekutumirwa kwemidziyo yekuparadzira, iyo kazhinji kazhinji inoshanduka kuita kutengesa kwakananga. Kunyange chiri chokwadi kuti nhamba idzi dzinonakidza, kana tikatarisa nhamba dzegore rapfuura munguva imwechete, tinoona kuti sei Munguva yechina yechina yegore ra2018, kutumirwa kweApple kwakaverengerwa 67.2% yeindasitiri iyi.
Ichokwadi zvakare kuti gore rega rega zvimwe zvinopfeka zvinotengeswa, zvekuti hazvireve kuti watengesa mashoma mayuniti. Izvo hazvireve kuti yatengesa mashoma mayunitsi, nekuti muQ4 2017 Apple yakatumira 7.8 miriyoni Apple Watch, nepo muQ4 2018 yakatumira mamirioni 9.2 emidziyo.
Pachinzvimbo chechipiri, tinowana Fitbit uyo akwanisa kuisa zvinopfuura mazana mashanu ezviuru pamusika panguva yeQ500.000 4, 400.000 mamwe mauniti kupfuura panguva imwechete gore rapfuura, iyo yakatendera kuti iwane chikamu che12.2%.
Pachinzvimbo chechitatu, tinowana Samsung, uyo akaonawo kuti huwandu hwekupfeka hwaakaisa pamusika hwakawedzera sei, kubva pamazana mazana matanhatu ezviuru akatengeswa muQ600.000 4 kune anopfuura mamirioni 5,3 mayuniti mukati mekota yekupedzisira ya2018.
Dzese idzi data hadziratidze kuti sei musika wepasi rose wewatchwatch wakura ne52%, ichisvika mamirioni gumi nemasere akatumirwa mukati megore ra18. Ikozvino musika maitiro ndeyekuti inoramba ichikura, kubvira nhasi, kuchine mamirioni mazhinji evashandisi vasina kutora chishandiso ichi chitsva, kunyangwe hazvo gore rega rega, rinogamuchira mashandiro matsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo Apple Watch yakatora hafu yemusika we smartwatch mukota yekupedzisira ya2018
Iyo LEGO Movie 2 Videogame inowanikwa munaKurume weMac
Australia's Bondi Junction Apple Store inovhara kugadziridza munaKurume 24